Mụta Ndụmọdụ Kachasị Mma Maka NFL ịkụ nzọ n'Onlinentanet - 429jp.info
Egwuregwu National Football League (NFL) aghọwo ihe a ma ama na afọ ndị na-adịbeghị anya na ịtụkwasị nzọ na egwuregwu NFL dị ka ihe na-atọ ụtọ dị ka ikiri egwuregwu ahụ n’onwe ya. N’ụwa nile, ndị mmadụ na-eji obere ego egwuruegwu ọ bụla na-atụ anya na otu egwuregwu ha kachasị amasị ha ga-ada n’elu wee pụta n’elu. Ma ị dị ọhụrụ maka ịkụ nzọ na egwuregwu NFL, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị nweta ume ngwa ngwa otu esi etinye nzọ gị, ntuziaka a ga-ekpuchi ụzọ dị iche iche ị ga – esi mee nke a, ha niile dị n’ịntanetị, na – eme ka ọ dị mfe na ga-adịrị gị mfe karị.
Ihe gbasaa bụ otu n’ime ụdị egwuregwu NFL kachasị ewu ewu. Nke a na-ezo aka na ọnụ ọgụgụ mepụtara ndị ọkachamara m na akwụkwọ egwuregwu, ọ na-enyekwa ohere ma ọ bụ ọghọm nye ndị otu NFL dabere na oke mmeri ma ọ bụ mmeri. A na-etinye ìgwè ndị ọkacha mmasị na ọghọm dị ka ha ga-achọ iji merie egwuregwu ahụ site na isi akara ụfọdụ, ebe a ga-enye ndị otu na-erughị ala ohere ịmeri egwuregwu ahụ ma ọ bụ merie egwuregwu ahụ n’akụkụ oke nke akara akara.
N’ihe banyere egwuregwu NFL, “ngụkọta” na-ezo aka na atụmatụ akara ikpeazụ nke otu egwuregwu abụọ jikọtara. Ngụkọta ndị a bụ nke ndị na-eme esemokwu na-esite na ya bụ otu ha si eche otu egwuregwu na-egosi n’ihe gbasara akara. Iji nwee nzọ na ngụkọta, ndị ịgba ụgwọ kwesịrị ịchọpụta ma akara ikpeazụ nke egwuregwu ahụ ga-agabiga ma ọ bụ n’okpuru mkpokọta. Enwere ọtụtụ ihe ekwesiri iburu n’uche tupu etinye nzọ na ngụkọta, gụnyere NFL ọkwa, iwe na-agbachitere ọnụ ọgụgụ na-adịbeghị anya egwuregwu na ndekọ na ọkụ.
NFL props nzọ bụ obere egwuregwu n’ime egwuregwu NFL. Dị ka ọ dị, ịkụ nzọ dị ntakịrị ihe na njedebe ikpeazụ nke egwuregwu ahụ. Ntinye aka na-abụkarị maka arụmọrụ onye ọ bụla, kama ịbụ nke ndị otu. Yiri ngụkọta, ndị na-eme ihe ngosi aghaghị ịkụ nzọ na isi ihe ga-agabiga ma ọ bụ n’okpuru ngụkọta ego. Agbanyeghị, isi okwu ndị a metụtara mmadụ ole ọkpụkọ bọọlụ gbatara karịa nke otu ha gbatara n’ogo. NFL ndị na-ewu ewu na-akwado nzọ nwere ike ịgụnye akara akara aka na ịnweta ogige.
A na-eme NFL Futures ịkụ nzọ na ihe omume nwere ike ime tupu ọgwụgwụ oge. Ndị a chọrọ ndị nkwụnye ego itinye ego ha tupu ha emee site n’ibu amụma gbasara ihe nwere ike ime. N’ezie, ihe egwuregwu NFL kachasị ewu ewu na-ewu ga-abụ otu egwuregwu ga-emeri Super Bowl. Agbanyeghị, ịkụ nzọ ọdịnihu abụghị naanị ịkọ onye ga-emeri asọmpi ahụ. Ndị ọzọ a ma ama metụtara onye ga-apụta dịka onye egwu bọọlụ n’afọ na ndị otu ga-emeri nkewa a.
A parlay na-ezo aka na-eme ọtụtụ ghota, dị ka onye ga na moneyline, gbasaa na totals nzo na iche iche egwuregwu. Kama, parlay chọrọ ka ịme ihe ndị ahụ niile n’otu tiketi. Iji merie parlay gị, nkwụnye ego niile ga-akụrịrị.